Akụkọ - Igbe Cheertainer na nkwakọ ngwaahịa BIB, dabara adaba maka oke ụlọ nke nkwakọ ngwaahịa mmiri ọñụñụ
Akpa Cheertainer na igbe, ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa BIB maka mkpụmkpụ. Emebere ya n'Australia na 1965 ma buru ụzọ jiri ya na ụlọ ọrụ mmanya, mana ọ gbasaala ugbu a ịgụnye ụdị ngwaahịa ndị ọzọ dị ka juices, soft drinks, mmanụ na sauces. E jiri ya tụnyere mmiri igbe na aluminom nwere ike ịgba mmiri, nkwakọ ngwaahịa BIB bụ ụzọ nkwakọ ngwaahịa tozuru oke ma kwụsie ike. N'ihi nchekwa ya, ịdị ọcha ya, mgbanwe na ịdị mma, ọ ghọwo onye ahịa na-agakarị n'ọtụtụ mba ọdịda anyanwụ.
Site n'ịre ahịa mmiri karama na-abawanye ụba, ọtụtụ ezinụlọ na-achọ ụzọ dị mma na gburugburu ebe obibi iji zụta ngwaahịa mmiri ga-elekwasị anya na mmiri ngwugwu BIB iji gboo mkpa nke ọnụ ọgụgụ mmadụ buru ibu na ịṅụ mmanya ogologo oge.
Akara mmiri ịnweta mmiri nke UK ekpebiela ibido nnukwu akpa Cheertainer nke dị lita iri n'ime igbe, na-ekwu na ọ na-egbo mkpa ezinụlọ dị iche iche ma na-arụ ọrụ ichekwa gburugburu ebe obibi.
Ngwunye akpa igbe na-aba uru na gburugburu ebe obibi, dị mma maka ndị na-azụ ahịa, ngwaahịa ahụ adịghịkwa mkpa ibuli ma tụfuo, na-adaba adaba maka ndị agadi na ụmụaka ịṅụ mmanya. Nkwakọ ngwaahịa square na-eme ka igbe ahụ dị mfe idowe na counter ma ọ bụ refrjiraeto, na mmiri mmiri nwere ike isi na faucet emebere n'akụkụ. Nkwakọ ngwaahịa square na-adịkwa mfe ibupu, na-ebelata ibu ibu na ikuku carbon.
Tụkwasị na nke ahụ, dị ka ụlọ mmiri nke akpa akpa si kwuo, nkwakọ ngwaahịa BIB n'onwe ya na-esi n'ìhè na-ekpo ọkụ ma na-ekpo ọkụ kpamkpam, ya mere nje bacteria na ikuku dị n'èzí enweghị ike ịbanye na mmiri, nke na-ewepụ ohere nke ịmụ nwa ma nwee ike ime ka ndụ mmiri dị ogologo.
"Bags Cheertainer na igbe agaghị abụ ụzọ bụ isi nke nkwakọ ngwaahịa maka mmiri na ụlọ ahịa brik na-mortar. "Ma na ọrụ nri na e-azụmahịa, ọ na-eto eto nke ukwuu nke na anyị na-ahụ ike nke uto na ọwa abụọ ahụ."
Ọnụ ahịa mmiri nke akpa akpa na igbe ga-anọgide na-eto eto. N'ihi obere olu ya na nnukwu ikike, ọtụtụ ụdị ga-eji ya dị ka ihe ngwọta ọhụrụ maka ụdị mmiri ọṅụṅụ ezinụlọ.
N'ịkwalite nkwakọ ngwaahịa enyi na gburugburu ebe obibi, maka ịchụso ndụ ndụ na ahụike nke ezinụlọ, mmiri dị n'ime akpa igbe iji kesaa otu ofe, dịkwa mfe ịnweta.
Oge nzipu: Nov-01-2021